जापान अनुभव Archives | Nepali In Japan
18Jan By Nepali In JapanNo Comments
हामी सानै छँदा नै सुन्दै आएको कुरा हो, जापान एउटा बिकसित मुलुक हो । धेरै पहिले नेपालबाट जापान आउने नेपालीको संख्या निकै थोरै भएर होला, त्यो बेला नेपालीको लागि जापानएउटा सपनाको संसार जस्तो नै लाग्दथ्यो । पहिलेको तुलानामा हाल नेपालीको संख्या बढेको र आउने माध्यम पनि बिभिन्न किसिमका हुने भएकोले पहिले जस्तो महत्व नभएपनि, नेपालमा रोजगारको अभाव, आउनको लागि अलि बढि खर्चिलो भएर होला धेरैका लागि अहिले पनि जापान सपनाको शहर हुन सक्छ । बिभिन्न भिषामा जापान आई आफनो परिवार (श्रीमान वा श्रीमतीलाई) जापान बोलाई सकेपछि बच्चा जन्माएर हुर्काउने, जापानमै राख्ने प्रकृयामा केहि अनुभवहरू यहाँहरु समक्ष राख्न चाहन्छु । यि मेरा नितान्तै व्यक्तिगत विचार र देखेभोगेका अनुभवहरु हुन्, यहाँ बसोबास गर्दै आइरहनुभएका सबैको हकमा यि कुरा लागु नहुन पनि सक्दछन् । जापानको स्वास्थ्य क्षेत्र यहाँ बसोबास गर्ने बिदेशी नागरिक (जस...
4Nov By NIJ AdminNo Comments
प्रेरणा बनोस् जापान
जापान आएको दुई साता नबित्दै एक जापानी वृद्धसँग करिब दुई घण्टा एउटा नेपाली रेस्टुरेन्टमा बसेर भलाकुसारी गर्ने अवसर जुट्यो, त्यस दिन म आफु बोल्नेभन्दा धेरै सुनेर बसे । देश विदेश घुमेका ती व्यापारी वृद्धले भन्दै थिए, 'दोस्रो विश्वयुद्धको भयानक बमबारी पश्चात हामीसँग केही थिएन, थिए त केवल पराजित जनता ! तिनै पराजित जनता नै हाम्रा अमूल्य सम्पत्ति भए, हाम्रो पुस्ताले कडा परिश्रम गर्यो । हामीले हाम्रा सन्ततिको शिक्षामा जोड दियौं ताकि हाम्रो देश फेरी बलियो र सम्वृद्ध बन्न सकोस् र आज हामी धेरै सुविधा सम्पन्न अवस्थामा छौ । ” उनी भन्दै थिए “हरेक ठुलादेखि सानो काम गर्दा, जापानीहरु त्यसको गुणस्तरियता र सरसफाईमा विशेष ध्यान दिने गर्छन् ।” उनलाई नेपाल उच्च हिमशृंखला भएको जलस्रोतको धनी देश हो भन्ने सम्मको जानकारी रहेछ । “देश धनी हुन विदेशी पैसा आकर्षित गर्नुपर्छ, कृषिप्रधान देश नेपालले विदेशमा खपत हुने खेती...
20Oct By NIJ AdminNo Comments
जापानमा म यन्त्रमानव त बनिरहेको छैन ?
- राजु अधिकारी यन्त्र मानवको शहर म यो शहरमा म आएको धेरै भएको छैन। पहिलो पटक यहाँ पाइला टेक्दा म निकै रोमान्चित थिएँ किन भने सबै कुरा नयाँ लागेको थियो त्यो बेला- नयाँ ठाउ, नयाँ भाषा, नयाँ सस्कृती। मानिसको स्वभाव यस्तै हुन्छ- नयाँ हुँदा सबै कुरा राम्रो लाग्छ अनि पुरानो हुदै गए पछि त्यो कुराको महत्व घट्दै जान्छ। मेरो लागि पनि यो शहरको महत्व पहिले भन्दा घटेको छ। संसार कै सबभन्दा राम्रा र बिकसित शहरहरुमा पर्ने यो शहर सबैको सपनाको शहर हो। मानिसहरु यो शहरमा काम गर्न र बस्न आउनको लागि मरिहत्ते गर्छन । सुन्दर, सफा, ब्यबस्थित, सुरक्षित अनि सबै सुबिधाहरुले भरिपूर्ण यो शहरमा न कतै फोहर देख्न पाइन्छ न त कुनै प्रदुषण नै छ। मानिसहरु निकै सभ्य छन अनि निकै अनुशासित र विनम्र पनि। यस्तो लाग्छ धर्तिको स्वर्ग नै हो यो। म शहरको मुटुमै रहेको एउटा सानो अपार्टमेन्टमा बस्छु । ठुलो र सुबिधा सम्पन्न घरमा बस्न म...
17Oct By NIJ AdminNo Comments
विकासको चरमचूली टेक्दै गरेको जापानमा जिवन चलाउनका लागि आवश्यक सेवा सुविधाहरु सबैतिर पुगेका छन् । के गाउँ–के शहर पानी विजुली, मोटरबाटो रेल लगायतका सेवासुविधा पुगेका छन् । तरपनि ग्रामिण भेगको जिवन र ठूला सहरहरुमा विताइने जिबनवीच अन्तर त भै नै हाल्छ । आजको लेखमा हामी जापानको ग्रामिण र शहरी क्षेत्रको जीवनशैलीबीचको भिन्नताबारे केही जानकारी दिने प्रयास गर्दैछौं । यो जानकारी विशेषगरि नेपालबाट जापान आउने तयारी गर्दैगरेका वा सोच बनाउनुभएका साथीहरुलाई जापानका ठूला सहर र ग्रामिण क्षेत्र वीचको फरक थाहा पाउनका लागि उपयोगी हुनेछ । जापान आएर शहरमा वा ग्रामिण क्षेत्रमै मात्र बसिरहेकाहरुलाई पनि आफु नबसेको क्षेत्रको जीबनशैलीबारे जान्नका लागि सहयोगी हुनेछ । ठूला शहरको राम्रो पक्ष १.सुविधा ठूला शहरको प्रमुख विशेषतामध्येको एक हो त्यहाँको सुविधासम्पन्न जीवनशैली । त्यहाँ यातायात प्रणाली, सुविधाजनक स्टोर, रे...
खै कसरी लुट्दैछु र म जापान ?
- प्रकाश पन्त 'प्रतिराेध' एउटा साथीले ठट्याैली पारामा मुस्कुराउँदै भन्दै थिए 'विदेश लुट्नु पर्छ' । त्यतिखेर म चुपचाप सुन्दै थिएँ । एकछिन हाँसो फैलिएको माहाेललाई शान्त पार्दै अर्का मित्र आक्रोश पोख्दै कुर्लीए । के लुट्छस विदेश ? हामीले विदेश लुटेका छैनाैं, उल्टै विदेशले हामी जस्ता लाखाै युवाको जवानी लुटिरहेको छ । कति मर्मस्पर्शी र सत्यता थियो त्याे भनाइमा । साँच्चै हामीले के लुटेका छाैं र विदेश ? हामी जस्ता युवाको जवानी लुट्दैछ विदेशले । बहत्तर घण्टा न निद्रा न भोक न थकाई कैयाैं पीडा मन भित्र गुम्स्याएर रात दिन नभनी मेशिनको तालमा मेशिन जस्तै वनेर चल्नु पर्ने कति कष्टकर र कारुणीक छ विदेश ! घरदेशमा रहेका अाफ्नाे परिवार, साथीभाइ अाफन्त अनि सिंगाे देशको असीम याद छाति भित्र सजाएर काममा जाेतिएका छाैं । साथीभाई, घर परिवार, आफन्त, आमा बाबु अनि बाल बच्चा र श्रीमान श्रीमतीको न्यानो काख लुटेको छ व...
19Jan By NIJ AdminNo Comments
– धन बहादुर आले भर्खर जापान आउँदा १ वर्षको शुल्क र ६ महिनाको कोठाभाडा नेपालबाटै तिरिएको थियो, त्यति फिक्री भएन । काम दु:ख भए पनि पाइएकै थियो, कमाइ राम्रै थियो, हातमा आइफोन आएको थियो । २ लाख जति कमाई हुन्थ्यो, फोनको बिल र तेइकी बाहेक तिर्नु केहि पर्दैनथ्यो । नपढेनी ४ वर्ष जापानमा यहि औसतमा कमाउन पाए त जापान बस्नै पर्दैन, कमाएर नेपाल जान्छु भन्ने सोंच आयो। पढाइमा ध्यान गएन। जापान आएको ६ महिना बित्यो। फाट्ट-फुट्ट बोल्न सकिने भैयो । हिरागाना-काताकाना बाहेक अन्य बेसिक पढाइका कुरामा त्यति ध्यान गएन, अब पढाइमा खान्जीको अभ्यासको बोझ थपियो। रात-दिन काम गरेर आएर थलिएको शरीर, एयर-कन्डिसनरयुक्त कक्षाकोठामा निन्द्रा नलागेर के लागोस त ? मेरा लागि बस्ने कोठा ससुराली र कक्षाकोठा घर जस्तो भैसकेको थियो । अब कोठाभाडा आफै तिर्नुपर्ने भो, गाक्कोको होस्टेल महँगो लाग्न थाल्यो, कोठा खोज्नु पर्यो । अब पह...
23Nov By NIJ AdminNo Comments
जापान अनुभव : ‘नेपाल फर्केर भाँडा माझ्न लजाउँदिन’
पैसा, पैसा, पैसा । हरेक कुरामा यही पैसाकै जरुरत पर्नेरहेछ । जन्मनका लागि पनि पैसा, बाँच्नका लागि पनि पैसा अनि मर्नका लागि पनि पैसा । बडो नराम्रो बस्तु रहेछ यो पैसा भन्ने कुरा । लिन पनि झण्झट अनि दिन पनि, पैसाकै कारण एक छाक खाएरै टार्नुपर्नेको पीडा, पैसाकै कारण मानिसका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्नुका पिडा, पैसाकै कारण आफ्नै परिवारबाट अलग्गिनुपर्नेको पिडा, आफ्नै देशमा, आफ्नै माटोमा पसिना बगाउने रहर हुँदाहुँदै पनि संसारभर छरिएर रहेका देशहरुलाई आजिवन कर्मभूमी बनाउनुपर्ने पिडा बोकेका ति बाध्यताहरुमा जेलिएका हजारौ नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीहरु मध्येको एक 'म' । सन् २०१६ अप्रिल महिनाको अन्तिम साता । 'जापानको भिषा' टाँसिएको पासपोर्ट हातपर्दा खुशी जति थिएँ दुखी त्यतिनै । मन दोहोरो चलिरहेजस्तो लाग्थ्यो । एक मन सोच्थ्यो उता पुगेपछि घरको आर्थिक स्थिती सुर्धाछु, भाई बहिनीहरुलाई राम्रो स्कुल पढाउँछु...
16Nov By NIJ AdminNo Comments
जापानमा मैले गरेको मेहेनत, केका लागि ?
हिजो राती छिरेको सेभेन इलाभेनको काम सकेर बाहिर निस्किएँ । घडिमा साडे ५ बजिरहेको थियो । म्याकडोनल्डमा किनेको बर्गर झोलामै थियो, भेण्डिङ मेसिनबाट कफी झारेर स्टेशन नजिकैको पार्कमा बसेर खाने तरखरमै थिएँ मोबाइलको घण्टि बजिहाल्यो । नेपालदेखि फोन आएको रहेछ, 'नेपालमा त उज्यालो नै भैसकेको छैन, किन आएछ यति विहानै फोन?' भन्ने सोचें, मोवाल थिचिएर आएको हो कि जस्तो पनि लाग्यो । हतार हतार उठाएँ, मैले हेलो भन्न नपाउँदै "सन्चै छस् बाबु ?" भन्ने आवाज सुने, आमाको । "म सन्चै छु आमा, तपाईंलाई कस्तो छ ? किन यति विहानै फोन गर्नुभएको?" भनेर सोधें । सपनामा मलाई देख्नुभएछ, बिउँझेपछि मलाई केही नराम्रो भयो कि भन्ने डरले फोन गर्नुभएको रहेछ । आमाको माया न हो । म आँफु आरामै रहेको र सबैकुरा सकुसल रहेको बताएपछि अलि ढुक्क हुनुभयो । "सुतिराखेको होलास्, डिस्टर्व भयो होला है ?" आमाले सोध्नुभयो । हैन आमा भर्खर कामबाट फर्...
1Oct By NIJ AdminNo Comments
जापानमा विश्वासमै चल्छन् ‘पसले बिनाका पसल’
भित्रपट्टी जाली अनि सिसा, बलियो फलामे ग्रिल बलियो सटरले बारेर बनेको पक्की पसल होस् या घरमा जतिनै ताल्चा मारेर गार्ड राखे पनि दिनदहाडै चोरी हुनसक्ने हाम्रो देश नेपालमा पसले बिनाको पसलको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन। जतिसुकै बलियो चाबी लगाए पनि फोरेरै छाड्छन चोरहरुले । त्यसैले देउताको मूर्तिसमेत फलामे बारले छेकेर ताल्चा ठोकेको देखिन्छ । तर अति विकसित जापानमा यस्ता पसले बिनाका पसलहरु अझै पनि थुप्रै ठाउँमा देख्न पाइन्छ । सुन्दा अचम्म लाग्ला, तर यहाँ शहरबाट ५–१० मिनेट जति भित्री बस्तीहरुमा पैदल हिँड्ने हो भने पनि मान्छे हिँड्ने बाटोहरुमा, आलु, गोलभेडा, फलफूल लगायत धेरै तरकारी, लुगा, विद्युतीय सामान आदि इत्यादी सामानहरु बिक्रीका लागि राखिएका हुन्छन् । यस्ता पसलमा न कुनै सटर हुन्छ, न कोही पसले नै । मात्र किनेर लानेहरुको लागि प्लास्टिकका झोला अनि पैसा राख्ने खुत्रुके राखिएको हुन्छ। यी माथ...